Ajụjụ - Quanzhou New Hunter Bags & Luggages Co., Ltd.
Akpata / azu paaki
Tote akpa & Duffle
Bè akpa / ozi ozi
Akpa ịchụ nta
mmiri na-enweghị mmiri
akpa ịchọ mma
Companylọ ọrụ anyị
You bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị nwekwara ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-adabere na pls! N'okwu a, anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ozugbo na enweghị nghọtahie nye ndị ahịa anyị.
Enwere m ike ịnweta ihe nlele?
Ee n'ezie .
Y’oburu n’acho iberibe ihe nlere mbu anyi nwere na ulo oru anyi, o nwere ike buru nfe ma gha enyere gi aka.
Ọ bụrụ na a ga-ewepụta ihe nlele ahụ dabere na imewe gị wdg, anyị ga-elele ihe onwunwe na ihe ndị ọzọ wee gwa gị, ọ bụrụ na ihe ndị ahụ anyị nwere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ihe nlele ahụ nwere ike ịbụ n'efu. Ọ bụrụ na ihe ahụ pụrụ iche ma kwụọ ụgwọ nke ukwuu, na nke a, anyị ga-eji gị mee ka ị hụ otu esi edozi ụgwọ nlele ka mma.
Gịnị bụ oge na-eduga maka nlele ahụ?
Nọmalị 7-10 ụbọchị dabere na ụdị ị na-etinye.
Kedu ihe ị na-eme iji chịkwaa ụdị ụdị akpa ọ bụla (Maka ihe nlele / Maka nnukwu mmepụta)?
a) Maka nlele: * ịlele usoro mpempe akwụkwọ zuru ezu; * na-achọ akwa ahụ & mkpụbelata iji kwado atụmatụ ahụ; * ụzọ nyocha; * na-enyocha ndị nlele ikpeazụ iji hụ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla chọrọ ka mma tupu ịziga ndị ahịa.
* Idozi ọkọlọtọ nnwale ọ bụghị naanị na arụmọrụ phisical akpa kamakwa nyocha akụrụngwa kemịkalụ dabere na ahịa nke ndị ahịa anyị, na-agwa ndị ahịa anyị maka nnabata ha ikpeazụ.
b) N'ihi na nnukwu produciton iwu: dabere na ime ihe na sample ogbo, nkọwa niile na ajụjụ nkịtị e biri site ahịa na anyị. anyị ga-agbaso atụmatụ mmepụta iji jide n'aka na nnukwu mmepụta rụpụtara n'oge! N'oge mmepụta, ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla, anyị ga-agwa ndị ahịa anyị tupu oge eruo iji hụ na ha nwere oge iji gosi ma ọ bụ dozie nsogbu ahụ n'ọdịnihu.
Have nwere katalọgụ iji nye oge ọ bụla?
Ee, anyị nwere onwe anyị mmebe, anyị chepụta na ịzụlite dị iche iche ụdị akpa ọ bụla oge izute ejiji trendy.
Catelogue ọkara afọ ọ bụla nwere ụdị akpa dị iche iche! biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ e-catelogue anyị.
Kedu otu esi eme ma ọ bụrụ na enweghị m ike iru MOQ gị?
Anyị nwere ụdị ụzọ dị iche iche iji tụọ maka ntụaka gị. anyị na-atụ anya na nke ọ bụla nwere ike ịbụ ụzọ ị chere na enyemaka dị ukwuu ịkwaga na iwu ahụ. Ọmụmaatụ: Nọmalị ihe mere na ị gaghị izute anyị MOQ bụ na i nwere gị onwe gị imewe ma ike iru MOQ ka anyị akwụkwọ na ákwà na trims wdg Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, anyị ga-agbalị na-atụ aro ụfọdụ yiri akwa ma ọ bụ trims ịhụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ime izute gị nke ọma.OR, ọ bụrụ na ọnụọgụ gị bụ naanị mkpụrụ ole na ole 30-50pcs, anyị ga-atụ aro ngwaahịa anyị, nke nwekwara ezigbo mma mana ọnụahịa dị mma, ọdịdị ejiji kwa oge. Anyị ga-enwe onye njikwa ọrụ anyị iji soro gị tụlee ụdị ajụjụ ga-eme ma ọ bụrụ na ịnweta email gị.
You nwere ike ịhazi ahịa?
Ee, kwa afọ anyị ịzụlite dị iche iche ụdị bags.many ahịa nwere ike họrọ anyị akpa imewe ma ahaziri ha logo ọ bụ ndị dị otú ahụ a azụmahịa anyị mgbe niile na-arụ ọrụ na.
Kedu ụdị usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
Nkwụnye ego T / T. D / P D / A WESTERN UNION PAYPAL Ọ nwere ike bụrụ discusse.
Gịnị bụ gị akwụkwọ ikike maka ngwaahịa?
Anyị nwere usoro nlekọta njikwa siri ike, ma nwee ọkachamara ọkachamara iji na-akpọtụrụ gị, na-achịkọta ọnụ ọgụgụ ahịa gị mgbe a gachara, na nke a, anyị nwere ike ịghọta nke ọma akụkụ ndị anyị ka siri ike ma nwee ike ịbanye n'ahịa, yana akụkụ nke anyị ka kwesịrị imeziwanye. Anyị ga-eche ihu nsogbu ọ bụla na nsogbu ahịa mgbe ị kpọtụrụ anyị, Ọ B NOGHIS IHE MERE EGO.
Chọrọ iso anyị rụọ ọrụ?
Yingbin East Road, Chengnan Industry Mpaghara, Hui'an Country, Quanzhou, Fujian, China
Ekwentị: 86-595-87351963, 86 (0) 18876215427
Ekwentị: 86 (0) 18876215427